1- Cristiano Ronaldo : Ronaldo waxa uu xili ciyaareedkan ku bilawday jawi aan fiicnayn isaga oo kulamadii ugu horeeyay ee Serie A awoodi waayay in uu dhaliyo goolkiisii ugu horeeyay, laakiin markii uu dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay waxa uu markiiba raacsaday goolkii labaad waxayna noqotay tusbax furtay.
33 sano jirkan reer Portugal ayaa si layaableh sare ugu qaaday hamigiisa ku guulaysiga abaal marinta Ballon d’Or kadib markii uu soo bandhigay qaab ciyaareed fiican kaas oo uu ku heli karo in markii lixaad uu ku guulaysto abaal marinta Ballon d’Or.
Cristiano Ronaldo waxa uu qiimaynta Ballon d’Or Power Ranking kaga jiray kaalinta 2 aad laakiin hadda isaga ayaa noqday kan ugu cad cad ee kaalinta 1 aad ku fadhiya marka loo qiimeeyo wax qabadkiisii garoonka dhexdiisa ee kadib markii la soo saaray liiska musharixiinta abaal marinta Ballon d’Or.
Ronaldo ayaa afar kulan oo uu saftay bishii October waxa uu kooxdiisa Juventus ugu soo dhaliyay 4 gool waxa uu Juventus siiyay kalsooni dheeraad ah iyada oo waliba ka mid noqotay kooxaha xili ciyaareedkan ugu fiican qaarada Yurub.
Ronaldo ayaa 8 gool iyo 5 gool caawin ka soo sameeyay kulamadii Serie A wuxuuna 135 kii daqiiqaba uu ku soo lug lahaa hal gool oo Serie A ay kooxdiisa Juventus ka soo dhalisay waxanana loo arkaa in Ronaldo uu ka mid yahay ciyaartoyda u qalma Ballon d’Or balse aan la filayn in uu ku guulaysan doono.
Haddaba akhriste, haddii uu xidig ahan ahayn Ronaldo iyo Messi uu ku guulaysto abaal marinta Ballon d’Or, miyaad filaysaa in qaabkii abaal marinta The Best ay sumcadeedu hoos u dhici doonto? Adiga ahaan, waa kuwee shanta ciyaartoy ee u qalma abaal marinta Ballon d’or in midkood uu ku guulaysto?.